राष्ट्रियसभा बैठक: विधेयकमाथि छलफल – Himalaya TV
Home » समाचार » राष्ट्रियसभा बैठक: विधेयकमाथि छलफल
राष्ट्रियसभा बैठक: विधेयकमाथि छलफल
४ भाद्र २०७५, सोमबार १२:५९
काठमाण्डौ, ४ भदौ । सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको अधिकार संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको छ ।
अपराध पीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको हो । संघीय संसदमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विधेयक ल्याइनुलाई सकारात्मक कदम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि अपराध पीडितलाई दिइने राहत र कसूरको वर्गिकरणमा केही पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राम नारायण बिडारीले विश्वका धेरै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा कायम गर्ने उद्देश्य साथ विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले बेपत्ता पारिएका नागरिक, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका, अपहरणमा परेका लगायतलाई न्याय दिनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए । मुलुकमा अनेकौं विकृति आइरहेका बेला अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानून आउनु नविनतम र महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण विकृतिलाई हटाउने सवालमा विधेयक कोशेढुंगो सावित हुने दाबी गरे ।
बिडारीले भने, “हाम्रो समाज अहिले अस्तव्यस्त छ । संसार भरि भएको विकृति जति खोजी खोजी माईतीघर मण्डलामा र सडकमा ल्याउने काम नेपाल विरोधीहरूले गरिरहेका छन् । नग्न तस्वीर मात्रै हो र ? मान्छे सिंगै नाङ्गै सडकमा ल्याउने । युवालाई ल्याउने । युवतीलाई ल्याउने । यस्तो विकृति भइरहेको हाम्रो देशमा राम्रा राम्रा कुरा पनि भित्रिएछन् । अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानून पनि आएछन् । यो मण्डलामा प्रर्दशन हुन्छ ? या सडकमा प्रर्दशन हुन्छ ? गर्दैनन् तिनीहरू । तिनीहरु नेपालका विरोधी हुन् । तिनीहरू नेपालीका विरोधी हुन् । संविधानका विरोधी हुन् । ”
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारले पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउनु अत्यन्तै उत्तम भएपनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय र केसको वर्गिकरणमा गरिएको व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयकमा उल्लेखित पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । पीडक क्षतिपुर्ति दिन नसक्ने अवस्थाको भएमा वा अदालति प्रक्रिया लम्बिंदै गएको अवस्थामा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने भएकाले क्षतिपर्तिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राखेका प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।